Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Dalxiiska tallaalka: ma wanaagsan yahay, ma xun yahay mise waa dan la'aan?
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Dib-u-dhaca dheeraadka ah ama yaraanta tallaallada COVID-19 ee waddamada qaarkood ayaa u horseeda dalxiisayaasha inay u safraan meelo kale.
Dalxiiska tallaalka wuxuu keenaa su'aalo ku saabsan sinnaan la'aanta tallaalka.
Dalxiiska tallaalku wuxuu kordhiyaa kala qaybsanaanta u dhaxaysa dadka hodanka ah iyo kuwa mudnaanta yar.
Dadka ugu taajirsan dalalka saboolka ah ayaa awood u leh inay helaan tallaalada sababtoo ah waxay awoodaan inay safraan.
Dalxiiska tallaalka, halkaas oo meelaha dalxiisku ay hadda ku bixinayaan tallaallada COVID-19 fasaxa si ay u soo jiitaan booqdayaasha, waa seef laba af leh, in kasta oo ay ka caawin karto dib-u-bilaabashada safarka, waxay sidoo kale kicineysaa su'aasha sinnaanta tallaalka maadaama ay sii kordhin doonto kala qaybsanaanta dadka hodanka ah iyo kuwa mudnaanta yar.
Sahaminta macaamiisha Q2 2021 ee warshadaha ayaa lagu ogaaday in kaliya 6% jawaabeyaasha caalamka aysan ka walaacsaneyn saameynta COVID-19. 94% soo hadhay waxay ahaayeen 'aad u', 'xoogaa' ama 'aad u' danaynaya. Iyada oo walaac badani jiro, fursadda tallaalka ayaa dad badani ka faa'iidaysteen. Dib-u-dhaca dheeraadka ah ama yaraanta tallaallada COVID-19 ee waddamada qaarkood ayaa u horseeda dalxiisayaasha inay u safraan meelo kale.
Dadka ugu hantida badan dalalka saboolka ah ayaa hadda awoodi doona inay helaan tallaalada marka hore maadaama ay awoodi karaan inay safraan. Tani waxay kor u qaadeysaa doodda ah in waddamada dhiirrigeliya dalxiiska tallaalka ay ku deeqi karaan qiyaaso tallaal oo xad -dhaaf ah halkii ay marin u heli lahaayeen dalxiisayaasha hodanka ah.
Waa hubaal US dawladaha, Ruushka, Maldives, iyo Indonesia ayaa ah qaar ka mid ah meelaha socdaalka ee hadda siiya dalxiisayaasha. Qaar ka mid ah wakaaladaha socdaalka ayaa fursad u helay inay kor u qaadaan xirmooyinka socdaalka tallaalka si kor loogu qaado dakhliga. Gudaha Russia, tusaale ahaan, saddex toddobaad dalxiiska tallaalka xirmooyinka qiimahoodu u dhexeeyo US $ 1,500 ilaa US $ 2,500, marka laga reebo qiimaha tigidhka diyaaradda, waxaa ku jira tallaal. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo meelo badan oo adduunka ah ay wali la halgamayaan sahayda tallaalka oo hooseysa, tani waxay kor u qaadeysaa su'aasha sinnaanta tallaalka.
Sida laga soo xigtay xogtii ugu dambaysay, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Koongo waxay samaysay 3.5 tallaal 1,000 qofba ilaa 25kii Ogosto 2021. Marka la barbardhigo, Maraykanku wuxuu maamulay 1,115 tallaal 1,000 qofkiiba isla taariikhdaas. Tani waxay muujineysaa in durbaba uu jiro farqi aad u weyn oo u dhexeeya dalal kala duwan, qaar badanna waa laga tagay.
Mid ka mid ah toganaanta dalxiiska tallaalka ayaa ah inay door ka ciyaari karto dib-u-bilaabashada safarka ka dib markii masiibada COVID-19 ay jilbaha u saartay qaybta. Bixitaannada caalamiga ah ee caalamiga ah ayaa hoos u dhacay -72.5% sannadkii (YoY) iyo safarada gudaha -50.8% YoY, sida lagu sheegay xogtii ugu dambeysay. Tani waxay muujineysaa saamaynta ba'an ee masiibada iyo sababta meelaha adduunka oo dhan ay ugu hamuun qabaan dib -u -bilowga safarka.